Tue, Nov 19, 2019 at 10:35am
सोमबार, ९ आषाढ २०७६,	- टिकाराम खनाल.	2.21K
अर्घाखाँची, ९ असार ।
पहिले-पहिले बिभिन्न स्थानमा पानीका मूलहरु प्रशस्त भेटिन्थे । दैनिक हिड्ने स्थानीयदेखी बाटो हिंड्ने बटुवाले समेत तिर्खा लाग्यो भने मूलकै पानी पिएर आफ्नो तीर्खा मेट्थे । त्यसबाट उनीहरुलाई नयाँ उर्जा समेत मिल्थ्यो ।
तर, अहिले समय बित्दै गयो, जनसन्ख्या बढेसँगै प्रकृतिको उपभोगमा समेत मानवीय लापरवाही बढ्न थाल्यो । जसको फलस्वरुप हिजोआज सलल बग्ने त्यस्ता स्वच्छ मुहानहरु भेट्न गाह्रो हुँदै गएको छ ।
यस विषयमा युवाहरुले हस्ताक्षरसहितको निवेदन वडा नं. १ का अध्यक्ष भोज राज खनाललाई ढाकाबाङ्ग, सिटेनीस्थित कार्यालयमा बुझाए । सो अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष खनालले आफू निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले अभियानमा पूर्ण सहयोग रहने बाचा गर्नुभयो ।
केही बचेखुचेका मुहानहरु समेत अहिले सुक्दै गएका छन् । दैनिक मानवीय जीवनका अभिन्न मानिएका त्यस्ता मुहानहरु अहिले लोप हुने अवस्थामा छन् ।
मुहान बचाऔं अभियानको थालनी
यही क्रममा पानीका मुहानहरु सुक्दै गए भने आगामी पुस्ताका लागि खानेपानी टाउको दुःखाईको विषय बन्ने संभावनालाई लिएर अर्घाखाँचीमा खानेपानीका मुहान बचाऔं, प्राण बचाऔं अभियानको थालनी समेत गरिएको छ ।
अर्घाखाँची जिल्लाको भूमिकास्थान नगरपालिका वडा नं. १ बाट सुरु भएको उक्त अभियानको सुरुवात स्थानीय युवाहरुको सक्रियतामा अघि बढाइएको हो ।
निवेदनमा पानीका स्रोत जोगाउन मुहानका वरपर कम्तीमा ५० मिटरको आसपासका क्षेत्रमा ऐसेलु, भुटुक्, फलेदो लगायतका अन्य विभिन्न उपयोगी बिरुवाहरु लगाउनका लागि सहयोग जुटाउन अनुरोध गरिएको छ ।
यस विषयमा बोल्दै अभियान्ता लालमनी खनाल ले अभियानलाई वडा नं. १ ,२ हुँदै विस्तारै भूमिकास्थान नगरपालिका लगायतका स्थानका आम समुदायसँग समन्यय गर्दै विस्तारै अर्घाखाँची जिल्ला भर नै ब्यापक बनाइने योजना रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।